Arday tira badan oo maanta ku dhimatay iskuul ku yaalla Nairobi oo soo dumay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Arday tira badan oo maanta ku dhimatay iskuul ku yaalla Nairobi oo...
Arday tira badan oo maanta ku dhimatay iskuul ku yaalla Nairobi oo soo dumay
Nairobi (Halqaran.com) – Sida ay sheegtay Hay’adda Bisha Cas ee Kenya, ugu yaraan 7 arday ayaa dhimatay 59 kalena waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii uu soo dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Dhismaha ayaa burburay daqiiqada yar uun kaddib toddobadii subaxnimo xiligaas oo ardaydu galayeen fasalladooda.
Gaadiidka gargaarka ee Joon Ambalaas oo ka qeyb qaadanayay badbaadinta ardayda uu fasalka ku soo dumay ayaa sheegay in 7 arday ay ku dhinteen burburka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Isbitaalka dowladda ayaa xaqiijiyay in 59 qof ay ku dhaawacmeen burburka iskuulka wax ayna intaasi ku dareen in ardaydii dhimatay loo qaaday xabaalaha.
Maamulka Isbitaalka Kenyaata ayaa sheegay in dhaawacyada ardayda ay u badnaayeen dhaawacyo fudud oo u badan gacmaha iyo daqarro dhanka madaxa ah.
Ardayda ay dhaawacyadu soo gaareen ayay da’doodu u dhexeysay 8 illaa 15 sano.
Milkiilaha iskuulka ayaa burburka iskuulka ku tilmaamay shil isaga oo dayaca iskuullka ku eedeeyay duqa magaalada Nairobi.
Arday ku dhimatay Nairobi
iskuul ku soo dumay
Madaxdii hore ee dalka iyo Cali Guudlaawe oo kulan xasaasi ah u socda
DAAWO VIDEO: Maxaa ka soo baxay Kulankii Madaxweyne Deni & Baarlamaanka Puntland?
Warar Xiiso Leh
Haweeney in ka badan 60 sano ka shaqeyneysay hal xafiis!
Halqaran - April 17, 2021 0
Eritrea has acknowledged its troops are participating in the war in Ethiopia’s northern Tigray region but has vowed to pull them out amid mounting...
President Farmajo meets int’l community in Mogadishu
Banadir Court summons six people charged with espionage
President Joe Biden to appoint new ambassador to Somalia
AMISOM, SNA military commanders set targets for joint operations against militants